Sarintany momba ny nosy | Fiaretana haran-dranomasina
Fitaovana fanaovana sarintany amin'ny haran-dranomasina mivoaka
Fanontaniana maro momba ny fitantanana haran-dranomasina no mifantoka amin'ny fahasalaman'ny haran-dranomasina toy ny hoe "faritra haran-dranomasina inona no manana rakotra haran-dranomasina velona tsara kokoa?" na "faritra haran-dranomasina inona no mahafeno fepetra sasany hanatsarana ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina?". Ny sarin'ny zanabolana multispectral dia mbola maditra loatra ka tsy afaka manavaka ny rakotra vatohara amin'ny ahidrano, izay manana sonia spectral mitovy. Vahaolana iray dia ny fampiasana angona data spectrometer (antsoina koa hoe data hyperspectral). Miaraka amin'ny tarika spectral an-jatony maro, ireo data ireo dia afaka misambotra ny fiovan'ny sonia spectral anelanelan'ny vato harana sy ny ahidrano, ahafahana manavaka azy ireo. Ny spectrometers momba ny sary dia azo apetraka amin'ny fiaramanidina hanangonana angona manerana ny faritra midadasika (jereo ny sary etsy ambany). Ny haben'ny tetik'asa izay mifanaraka amin'io fomba fanaovana sarintany io dia mazàna amina ampolony kilometatra vitsivitsy, manarona ireo firenena nosy kely na faritra misy vatohara. Noho ny habeny sy ny velaran-dranomasina kely misy azy ireo, ny nosy any Karaiba dia mpilatsaka hofidina mety tsara amin'ity haitao ity.
Fijerena an'i St. Croix avy amin'ny fiaramanidina Global Airborne Observatory. Sary © Marjo Aho
Ny Global Airborne Observatory (GAO) an'ny University of Arizona State miaraka amin'ny The Nature Conservancy dia nanangona angon-drakitra spectrometer momba ny sary mba hahazoana ny angon-drakitra haran-dranomasina qualitative, anisan'izany ny rakotra vatohara velona, ​​ny fihenan-tsofina (ny fandaminana telo-refy amin'ny firafitry ny haran-dranomasina), ary ny fandroana rano. Ity dingana ity dia mamokatra datasets fanampiny koa, anisan'izany ny rakotra algaly isan-jato, rakotra ahidrano ary rakotra fasika. Jereo sy ampiasao ireo sari-tany amin'ny tranokala Caribbean Marine Maps: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSarintany an-tsary an'habakabaka.
Spectrometre fitaratra miorina amin'ny fiaramanidina manangona angona hyperspectral. Loharano: Knaeps et al. 2006
Ny sarintany GAO dia ampiasaina hisafidianana ireo toerana famoahana ala any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Repoblika Dominikanina amin'ny alàlan'ny fanomezana torolàlana momba ny mari-pahaizana momba ny lojikajikajika sy ny tontolo iainana mba hampitomboana ny taham-pahafahana mivoaka ny ala araka ny voalaza ao amin'ny fanadihadiana natao etsy ambany.
Fandinihana tranga: Mampiasà Teknolojia Momba ny Remote Sensing mba hampahafantarana ireo fisafidianana fambolena any Bavaro, Repoblika Dominikanina
Ny ezaka famerenana amin'ny laoniny any amin'ny Repoblika Dominikanina dia notarihin'i misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFundación Grupo Puntacana (FGPC) ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR), fiaraha-miasa akaiky amin'ny TNC. Amin'ny maha mpampihatra ny haran-dranomasina azy ireo, ny programa ataon'izy ireo dia mifantoka amin'ny fampivoarana ny serivisy amin'ny tontolo iainana ho avy, ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny famerenana amin'ny laoniny, ny fampiroboroboana ny fitantanana ny fiarovana ny haran-dranomasina ary ny fanomezana fivelomana fivelomana maharitra. Ny tanjon'izy ireo amin'ny ankapobeny dia ny hampihenana ny fihenan'ny isan'ny haran-dranomasina sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ary ny fananganana tontolo iainana ny haran-dranomasina mivelona. Ny ankamaroan'ireo tanjona ireo dia tratra tamin'ny alàlan'ny fampielezana ny firaisana ara-nofo Acropora cervicornis, haran-dranomasina staghorn.
Sarintanin'i Karaiba atsimo manasongadina ny Repoblika Dominikanina. Sary © The Conservancy voajanahary
Ny FGPC sy ny FUNDEMAR dia nikarakara famokarana lehibe antsoina hoe "Coral Manias" izay anaovan'ny mpandray anjara sy mpilatsaka an-tsitrapo anjara, anisan'izany ireo ONG eo an-toerana sy iraisam-pirenena, ireo mpandraharaha misitrika, ny fizahan-tany fizahan-tany ary ny governemanta Dominikana, mandritra ny telo andro. Na dia nahomby aza ny Coral Manias, ny fisafidianana ireo toerana famoahana ala dia tsy nahitana masontsivana namboarina ho an'ny fifantenana tranokala. Fa kosa, ny mason-tsivana mifantina dia miankina amin'ny fahaizana eo an-toerana, izay mametra ny ezaka fivoahana amin'ny faritra kely amin'ny haran-dranomasina. Mba hananganana fomba mahomby amin'ny famoahana ny fisafidianana ny tranokala sy hanakarana ny fahombiazan'ny famerenana amin'ny laoniny, ampiasaina ny fitsapana lavitra mba hamantarana ireo toerana mety indrindra hamerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina.
Fijery an'habakabaka ny Repoblika Dominikanina. Sary © Jeff Yonover
Ao amin'ny 2019, TNC sy ny Global Airborne Observatory (GAO), miaraka amin'ny FGPC, FUNDEMAR ary ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDominikanana Arrecifal Mena (RAD), dia namorona andiana sarintany misy vahaolana avo lenta ho an'ny haran-dranomasina atsimo atsinanan'ny Repoblika Dominikanina, manarona ny faritra atsimo-dranomasina atsinanana. Ny GAO dia mampiasa sensor spektrometera fitarafana izay manangona sary haran-dranomasina avo lenta (1 m). Ireo sarintany manana vahaolana avo lenta dia nalaina avy tamin'ireto angon-drakitra maneho batymetry, rakotra vatohara velona ireto, ny fahasarotan'ny toeram-ponenana, ary ny isan-jaton'ny ahidrano, ahidrano ary fasika.
Ny sarintany GAO dia ampiasaina hisafidianana ireo toerana famongorana ala any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Repoblika Dominikanina. Ny masontsivana ara-pitaovana sy ara-tontolo iainana dia nampiasaina tamin'ny fifampidinihana akaiky tamin'ireo manam-pahaizana momba ny haran-dranomasina mba hampitomboana ny tetibola sy hampiakarana ny tahan'ny fahavelomana. Fepetra roa momba ny lozisialy mikendry ny fanamorana ny fizotran'ny famoahana ala sy ny fampihenana ny fotoana, ary noho izany, ny vidiny eny an-tsaha:
Ny elanelana misy eo amin'ny akanin-jaza sy ny toeram-pambolena (> 1000 m)
Fanaparitahana ny onja (natao ho laharam-pahamehana ireo toeram-ponenan'ny vatohara voaaro)
Fepetra ara-tontolo iainana dimy no noheverina hanatsara ny mety hahatafavoaka velona ny outplants:
Farafahakeliny 5-10% rakotra vatohara velona
Feno algoma 20-30% farafahakeliny
Fahalalana ambony noho ny fahasarotan'ny fonenana modely (ialao ny fonenana fisaka)
Ny halalin'ny 5-8 m
Vantany vao tapa-kevitra ny mason-tsivana sy ny elanelam-potoana misy azy ireo, ny sarintany GAO dia nampiasaina mba hahitana andiana tranonkala mifanaraka amin'ny mason-tsivana. Mampiasa ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampivoarana GEE fampiharana, ny tsirairay amin'ireo sosona fampidiran-dresaka dia azo zahana maso ary faritana ny fari-pitsipika. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia afaka mizaha ireo faritra izay tsy mahafeno ny mason-tsivana ary azo fidina ireo tranonkala fitrandrahana tsara indrindra. Andian-dahatsoratra GPS novolavolaina andro maro talohan'ny hetsika Coral Mania ary ny tranokala tsirairay dia voamarina raha mitombina ny mason-tsivana amin'ny alàlan'ny SCUBA sy snorkeling.
Fitaovana an-tserasera amin'ny sarintany GAO ho an'ny vatohara atsimo atsinanan'ny Repoblika Dominikanina izay ahafahana misafidy ny fepetra ekolojika hanamafisana ny fahombiazan'ny fivoahan'ny haran-dranomasina. Sary © The Conservancy voajanahary
Ekipa Coral Mania any Bavaro amin'ny taona 2019. Sary © The Nature Conservancy
Ny hetsika Coral Mania tamin'ny volana novambra 2019 dia nampivondrona mpilatsaka an-tsitrapo am-polony maro, anisan'izany ireo ONG, tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana Dominikanina, mpandraharaha antsitrika, ary ireo mpiara-miasa hafa eo an-toerana. Miaraka 1,711 Acropora cervicornis ny sombin-javatra dia naparitaka nanerana ireo tranokala tany Bavaro (Cabeza de Toro). Ny fanaraha-maso an-tsary dia nanamafy fa ireo tranokala voafidy ho famoahana alaina dia nahatanteraka ny mason-tsivana sy ny tontolo iainana ary naneho bebe kokoa fa ny sarintany GAO dia fitaovana ilaina hitodihana any amin'ireo toerana famerenana amin'ny laoniny.
Ity fandalinana tranga ity dia mampiseho fa ny angon-drakitra fanarahana lavitra dia fitaovana ilaina amin'ny fampahalalana ny fomba famerenana amin'ny laoniny tsara indrindra. Ny sarintany GAO dia marina tsara mba hisafidianana tranokala izay mety hampitombo ny sisa tavela amin'ireo haran-dranomasina. Tamin'ny volana Janoary sy Oktobra 2020, ny TNC dia nanara-maso ireo zava-maniry ao amin'ny tranokala telo voafantina tsy tapaka ary nanamafy ny 85% tafavoaka amin'ny sisan-dranomasina. Ny ekipan'ny fanadihadiana dia tsy nahita porofon'ireo sombina nihataka tamin'ny vinavina izay nanondro bebe kokoa ny mety amin'ny fivoahan'ny tranokala voafantina. Na izany aza, ilaina ny fanaraha-maso maharitra ireo làla ireo mba hiresahana tsara sy hanadio ny mason-tsivana sy ny fahombiazan'ny famerenana amin'ny laoniny.
Ny sandan'ny famerenana amin'ny laoniny dia novinavinaina tamin'ny $ 1,717 hatramin'ny $ 2,879,773 USD isaky ny hektara ref ary ny fikarohana dia manondro fa ny sandany amin'izao dia mihoatra ny tombony lehibe. ref Ny fampiasana angona lavitra mahatsapa dia azo ampidirina amin'ny hetsika famerenana amin'ny laoniny satria ny angon-drakitra avo lenta dia azo angonina avy amin'ny sarintany an-habakabaka amin'ny faritra midadasika (an'arivony ka hatramin'ny hektara marobe) miaraka amin'ny vidiny $ 0.01 USD isaky ny hektara amin'ny taha tsy ahazoana tombony. ref Ny fanamby lehibe hananana ity fandalinana tranga ity dia ny fananana ireo sarintany eny an-tànana, fa raha vantany vao mivoatra izy ireo dia tsotra ny fampiasana ny tranokala fifantina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFisafidianana tranokala amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny Spectroscopy fitaratra an-tserasera